Isiseko sekhiphedi esineSiseko seMitha yeSigaba esi-3 esikhokelwayo seMitha eLY-SM350
Imitha yokuHanjiswa kweSigaba esi-Smart ezintathu (i-CTVT iyasebenza) LY -...
I-Smart Three Phase Direct Line (iMitha esetyenziswayo) ye-LY-SM ...
I-DIN-Rail Smart single Phase Meter Prepend Meter LY-SM120
I-Smart Keypad yeSigaba esiSodwa esiHlawulelwayo yeMeter LY-SM150
Imitha yeSigaba esinye kunye neMilinganiselo ye-Bi-Directional LY-BM12
I-LY-BM12 yeemitha ziindleko ezingekho mgangathweni kwisigaba esinye, zisebenza kubathengi bokuhlala kunye neeprojekthi zemitha ezincinci. Zichanekile kwaye zigcinwe ngokufanelekileyo kwimisebenzi yokulwa nokuchaphazela, zilungele ukuqokelelwa kwexabiso eliphantsi kunye nezisombululo zokukhusela.
I-LY-BM12 yeemitha ziyilwe ngokusekwe kwisakhiwo esiguquguqukayo esibonelela ngeendlela ezininzi ngokuhambelana neemarike kunye neemfuno zabathengi.
Isigaba esinye seMitha ye-ANSI ye-LY-ANSI11
Uluhlu lwe-LY-AS lulutho-olusebenzayo lombane kwindawo yokubonelela ngezinto ezisetyenziswayo ngomgangatho ophezulu wokuchaneka kunye nokuthenjwa.
Iimitha zochungechunge lwe-LY-AS zenziwe ngokuhambelana ngokupheleleyo nemigangatho ye-ANSI, kunye ne-RS485 inketho ekhethiweyo yokunxibelelana ye-RS485 ukuxhasa izicelo ze-AMR.
Isigaba esinye seMitha ye-Anti-Tempering MY-BM13
I-LY-BM13 yeemitha ziindleko ezisebenzayo ezingaqhelekanga kwisigaba esinye, zisetyenziswa kubathengi bokuhlala kunye neeprojekthi zemitha ezincinci. Zichanekile kwaye zigcinwe ngokufanelekileyo kwimisebenzi yokulwa nokuchaphazela, zilungele ukuqokelelwa kwexabiso eliphantsi kunye nezisombululo zokukhusela.
I-LY-BM13 yeemitha yenzelwe ngokusekwe kwisakhiwo esiguquguqukayo esibonelela ngeendlela ezahlukeneyo ngokuhambelana neemarike kunye neemfuno zabathengi.
I-BS yekhiphedi yesiGaba esiTshatayo iMitha eLY-KP12B
I-LY-KP12B yeemitha ziindawo zokuhlala eziqhelekileyo zekhiphedi yombane kwiimitha zombane ohlawulelwa kwangaphambili nge-BS kunye / okanye ukhetho lohlobo, ukubonelela ngezinto eziphezulu ngokuchanekileyo kunye nokuthembeka, ukuvumela ukunxibelelana kwesigaba esinye.
Imitha ye-LY-KP12B yenzelwe ukususelwa kwi-T-T-20-itoni ngokuhambelana neenkcazo ze-STS, ihambelana ngokupheleleyo nemigangatho ye-IEC kwaye iqinisekiswe nge-STS kunye nezatifikethi zeSABS. Ukuchasana notshintsho olugqithisileyo kunye nemisebenzi yokulungiselela kwangaphambili ibenza babe zezixhobo zexabiso eliphantsi zokuqokelela imali kunye nesisombululo sokhuseleko.
Imitha yeSigaba esinye kunye noMlinganiso oSebenzayo we-LY-BM11
Imitha ye-LY-BM11 yimitha esebenzayo engabizi mali inesigaba esinye, isebenza kubathengi bokuhlala kunye neeprojekthi zemitha ezincinci. Ichanile kwaye igcinwe kakuhle ngokuchasene nemisebenzi yokuthintela, ilungele ukuqokelelwa kwexabiso eliphantsi kunye nezisombululo zokukhusela.
Imitha ye-LY-BM11 yenzelwe ukuba iseke kwisakhiwo esiguquguqukayo nesibonelela ngeendlela ezahlukeneyo ngokuhambelana neemarike kunye neemfuno zabathengi.
beSigaba Single Bhatala Energy Meter , Single Phase zhong Meter , Single Phase Smart Energy Meter , isiGaba Meter Single , iMitha yeSigaba esinye sokuLungiselela , Single Phase Electric Meter ,